Manchester United oo rajeynaysa inay Kooxda Real Madrid ku garaacdo saxiixa Van de Beek – Gool FM
Manchester United oo rajeynaysa inay Kooxda Real Madrid ku garaacdo saxiixa Van de Beek
(Yurub) 16 Mar 2020. Bilooyin ka hor, kooxda Real Madrid ayaa ku dhowaatay inay heshiis la gaarto laacibka Ajax khadka dhexe kaga ciyaara ee Donny van de Beek, balse Manchester United ayaa soo laba kacleysay, sidoo kalena doonaysa inay dhiggeeda kaga adkaato saxiixa xiddiggan.
Qorshaha Red Devils ayaa ah inay 22-sano jirkaan u soo bandhigaan qandaraas qaali ah si ay kaga xodxotaan inuu dhankooda soo jalleeco.
Van de Beek ayaa la rajeynayay inuu u dhaqaaqo caasimadda Spain xagaagii aynu ka soo gudubnay, laakiin markii Los Blancos ay ku guuldarreysatay inay iibiso James Rodriguez iyo Gareth Bale, waxaa laacibka reer Netherland loo sheegay inuu xilli ciyaareed kale sii joogo Magaalada Amsterdam.
Wararka ka imaanaya dalka Holland ayaa sheegaya in haddii Man United ay dooneyso saxiixa Van de Beek ay ku heli karto keliya inay Real Madrid ka baxdo rabitaanka laacibkan.
Xiddigga Ajax ayaa dhaliyay 10 gool, sidoo kalena waxa uu caawiyay 11 gool oo kale, waxaana uu caddeeyay inuu sanadkii hore helay fursad daciif ah oo uu ugu biiri karay Los Blancos.
Xilligan la joogo, Van de Beek saxiixiisa waxaa u dhow Real Madrid marka loo eego kooxda ka dhisan Ingiriiska, iyagoo xitaa mustaqbalkiisa gacanta ku haya, haddii ay go’aansadaan inaysan la saxiixan, Man United ayaa markaas kala hadli doonto kooxdiisa Ajax saxiixiisa.
Miyuu Cristiano Ronaldo ogolaaday inuu ku biiro Naadiga Inter Miami xagaaga soo socda?